Diyaar Garow dagaal oo ka dhexsocda Waqooyiga Kuuriya iyo Maraykanka. – Bosaso Times News
admin December 4, 2017 Diyaar Garow dagaal oo ka dhexsocda Waqooyiga Kuuriya iyo Maraykanka.2017-12-04T10:11:08+00:00 Puntland, somali News No Comment
Waxaa isa soo taraya hadalada kulul iyo handadaadaha hawada laysu marinayo oo u dhexeeya Waqooyiga Kuuriya iyo dalka Maraykanka. Dawladda Maraykanka oo uu hogaaminayo Donald Trump ayaa diidan in Waqooyiga Kuuriya ay yeelato kuna guulaysato samaysiga hubka Nugliyeerka.
Madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa ku eedeeya madaxweynayaashii ka horeeyey inay waxbadan ka gaabiyeen inay shaqo ka qabtaan hawsha Nugliyeerka ee Waqooyiga Kuuriya uuna doonayo inuu hubka ka dhigo dawladda uu ugu yeero Shuuciga wareersan.
Waqooyiga Kuuriya oo uu hogaamiyo nin yar oo keligii taliye Kim Jong-un ah ayaa doonayo inuu samaysto hubka wax gumaada ee Nugliyeerka taas oo uu ku doonayo inuu ku badbaado asaga oo aaminsan in si kale aysan ku badbaadeyn, waxayna ku andacoonayaan in hubka Nugliyeerku yahay waxa kaliya ee dawladda Maraykanku kaga cabsan karto.
Maraykanka iyo xulafadiisu waxay iyagu dhinacooda sheegayaan inaysan ogolaan karin W. Kuuriya oo nugliyeer yeelata.
Waxaa hada ka socda diyaar garow balaaran oo ay samaynayaan ciidanka cirka ee Maraykanka iyo kuwa Koonfurta Kuuriya ee ay xulafada yihiin badda u dhaw labada Kuuriyadood, waxaana laga cabsi qabaa in dagaal laysu adeegsado hubka wax gumaada uu qarxo .
http://www.bosasotimes.com/diyaar-garow-dagaal-oo-ka-dhexsocda-waqooyiga-kuuriya-iyo-maraykanka/http://www.bosasotimes.com/wp-content/uploads/2017/12/SouthKorea1.jpghttp://www.bosasotimes.com/wp-content/uploads/2017/12/SouthKorea1-150x150.jpg 2017-12-04T10:11:08+00:00 adminPuntlandsomali NewsBosasotimes,Dagaal Nugliyeer,Maraykanka,SC,Waqooyiga KuuriyaWaxaa isa soo taraya hadalada kulul iyo handadaadaha hawada laysu marinayo oo u dhexeeya Waqooyiga Kuuriya iyo dalka Maraykanka. Dawladda Maraykanka oo uu hogaaminayo Donald Trump ayaa diidan in Waqooyiga Kuuriya ay yeelato kuna guulaysato samaysiga hubka Nugliyeerka. Madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa ku eedeeya madaxweynayaashii ka horeeyey inay...admin siyaadyusuf@hotmail.comAdministratorBosaso Times News
Bosasotimes, Dagaal Nugliyeer, Maraykanka, SC, Waqooyiga Kuuriya
« Imaaraadka oo masaafuriyey Axmed Shafiiq oo ku dhawaaqay inuu u sharaxan yahay Madaxtinimada dalka Masar.
Cali Cabdala Saalah oo la dilay »